Testosteron phenylpropionate: Ny rehetra dia mila mahafantatra
Aogositra 14, 2019
1.Inona ny Testosteron phenylpropionate? Ahoana ny fomba fiasa eo?
Ny testosterone dia hormonina lahy izay mitranga amin'ny vatan'ny olona. Ny hormonina dia novokarina tamin'ny lehilahy amin'ny testicles. Ity hormonina ity dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fampivoarana ny fisehon'ny lehilahy sy ny fivoaran'ny firaisana ara-nofo. Ny toetran'ny lehilahy, toy ny lozom-bolo, ny hozatra, ny famokarana sperma ary ny drive sex, dia mandrisika amin'ny testosterone rehetra. Na izany aza, ny famokarana testosterone dia mihena amin'ny vanim-potoana iray. Amin'ny lafiny iray, ny testosterone dia steroid anabolika izay tsindrona amin'ny vatana hanampy amin'ny fananganana hozatra ary manatsara ny endrik'asa lahy hafa. Izay rehetra mijaly amin'ny fatran'ny testosterone ambany dia toro-hevitra ihany koa ny hitondra testosterone ho fanampiana amin'ny fanatsarana ny famokarana hormonina voajanahary ao amin'ny vatana.
Testosterone phenylpropionate (1255-49-8) dia steroid anabolika izay ampiasain'ny olona mijaly vokatry ny fihanaky ny testosterone ambany. Ny tsy fahampian'ny testosterone ampy amin'ny vatana dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana isan-karazany toy ny libido ambany, ambaratonga kely, ary afaka mampiato ny fivoaran'ny toetran'ny lahy toy ny feo lalina, ny volombava, na hozatra mandritra ny fahatanorana. Raha mitady zava-mahadomelina izay hanampy anao amin'ny tranon'ny hozatra ianao ary koa ny fanatratrarana ny tanjonao dia toy ny atleta, dia ny testosterone phenylpropionate no ho fanampin-javatra tsara indrindra. Ity steroid anabolika ity dia manome valiny momba ny kalitao raha mbola manaraka ny toromarika omena ianao.
Matetika ireo mpanamboatra testosterone dia mametaka ny zava-mahadomelina miaraka amina ester isan-karazany mba ahafahan'izy ireo mitoetra maharitra amin'ny vatana mandritra ny fotoana maharitra. Ny Phenylpropionate dia iray amin'ireo esters mahazatra izay miraikitra amin'ny testosterone mba hanohizana ny ain'ilay zava-mahadomelina amin'ny 4 hatramin'ny 5 andro. Ireo bodybuilders sy atleta dia isan'ireo mpampiasa testosterone phenylpropionate mahery vaika indrindra. Manampy azy ireo hampitombo hery ara-batana amin'ny ankapobeny ny fanafody, hanangana hozatra ary hanatsara ny fitotoana ara-nofo ihany koa. Na izany aza, toy ny rehefa mampiasa steroid hafa, dia tsara ny mandinika ny fitsaboana alohan'ny hanombohanao ity fanafody ity. Ny fampiasana testosterone phenylpropionate mety miovaova isaky ny olona tsirairay.
Ahoana ny asan'ny Testosteron phenylpropionate?
Testosterone phenylpropionate (1255-49-8) sahala amin'ny steroid anabolika hafa dia mandrisika ny vatanao hamokatra hormonina testosterone bebe kokoa. Ny fanafody dia miantoka fa ny vatanao dia manana haavon'ny testosterone testosterone ampy. Rehefa ampy ny haavon'ny hormonina lahy ao amin'ny vatanao, dia manomboka mankafy ireo tombontsoa azo avy hatrany ianao, ary afaka manatanteraka ny tanjonao. Ny hormonina koa dia tompon'andraikitra amin'ny fanamafisana ny fahaverezan'ny tavy, ny fitazonana ny lamosin'ny hozatra, ary ny fiarovana anao amin'ny Osteoporosis.
Ho an'ny mpamaky vatana, ny hozatra ary ny tanjaky ny vatana dia zava-dehibe amin'ny fanatanterahana tsara amin'ny fampiofanana sy ny fifaninanana. Ny hormonina testosterone dia manampy amin'ny famerenam-bolo ihany koa aorian'ny fanazaran-tena mavesatra noho izany mandritra ny fihodinana feno boribory. Ireo hormonina ireo dia mamatotra amin'ny Androgen Receptors (AR) mba hanafainganana ny tavy sy ny fitomboan'ny hozatra ary koa ny fanamboarana. Na izany aza, ho an'ny valin'ny testosterone phenylpropionate tsara kokoa, tokony hiaraka amin'ny dosage miaraka amin'ny sakafo sy fampiofanana mety ianao. Ampahafantaro ny mpanazatra sy ny mpanamory ara-tsakafo anao rehefa manomboka maka fatra amin'ny phenylpropionate testosterone. Mifandraisa amin'ny dokotera avy hatrany raha tsikaritrareo fa misy fiantraikany ratsy.
2.Ny tsingerin'ny pènylpropionate Testosteron
Ny testosterone phenylpropionate dia tokony hokarakaraina mandritra ny herinandro 6 ka hatramin'ny 8, miankina amin'ny tokony ho tratrarinao amin'ny faran'ny fihodinana. Ny dokoteranao koa dia hanamboatra ny tsara indrindra testosterone tsingerin'ny phenylpropionate ho anao rehefa avy nandinika ny fahasalamanao ianao. Indraindray ny dokotera dia afaka manatanjaka ny fatran'ny dosage na mampihena izany. Ny fizahana ara-pitsaboana tsy tapaka dia ilaina amin'ny fanaraha-maso ny fizotran'ny fanafody mandritra ny fihodinana. Ny testosterone phenylpropionate dia azo ampiasaina irery mandritra ny tsingerin-taona na miaraka amin'ny steroid anabolika hafa mba hahazoana vokatra tsara kokoa. Na izany aza, aza atambatra ny fanafody raha tsy mifampidinika amin'ny fitsaboana anao.
Ireo nanombohana dia nanoro hevitra ny hanomboka amin'ny fatra kely sy ny tsingerina fohy kokoa, izay azo amboarina any aoriana any hahazoana vokatra tsara kokoa. Ny mpampiasa Advanced testosterone phenylpropionate dia afaka mifikitra amin'ny vanim-potoana farany amin'ny herinandro 8 na mihoatra aza. Aza mampihena na mampitombo ny tsingerin'ny phenylpropionate testosterone, raha tsy nanoro hevitra anao ny dokotera hanao izany. Indraindray ireo mitsabo dia afaka manakana ny fihodinana afovoany raha sendra fiantraikany ratsy ianao mety hitarika ireo olana amin'ny fahasalamana. Samihafa ny fihetsiky ny olombelona amin'ny zava-mahadomelina isan-karazany; noho izany, tsy mandeha ho azy fa ny fanafody dia miasa ho anao araka ny fanirianao.
3.Ny valin'ny testosteron phenylpropionate
Testosterone phenylpropionate (1255-49-8), rehefa ampiasaina amin'ny fomba mety, dia manome valiny tsara ary amin'ny farany dia hanampy anao hahatratra ny tanjonao. Noho izany, ny fatra amin'ny sakafo, ny sakafo ary ny fanatanjahan-tena dia hiantoka valiny kalitao ianao. Ireto misy valiny mahazatra an'ny phenylpropionate testosterone mahazatra;
Ny fitomboan'ny hozatra, iray amin'ireo antony tokony hanombohanao maka ny Testosteron phenylpropionate ho toy ny mpanao bodybuilder satria manampy amin'ny fampivoarana ny fitomboan'ny hozatra. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny bodybuilder ny hozatra ary mba hahatratraranao fa mila maka steroid tsara ianao hanatsarana ny fivoaran'ny hozatra. Ny bodybuilder na atleta rehetra dia maniry ny hanana hozatra matevina, izay azo tanterahana amin'ny alàlan'ny fihinanana ity zava-mahadomelina matanjaka ity.
Ny fandoroana tavy, ny tsingerina manapaka dia ilaina ihany koa satria manampy amin'ny fanesorana ny tavy amin'ny vatana matavy loatra amin'ny vatana. Ny testosteron phenylpropionate dia fanampim-bidy mampihetsi-po tokoa satria mampisondrotra ny metabolisma, izay mitarika fako haingana amin'ny tavy amin'ny vatana. Azonao atao ny mampiasa ny zava-mahadomelina irery na miaraka amin'ireo steroid hafa anabolika izay hanamafisana ny fandoroana tavy.
Ny fanarenana sy fanamboarana ny hozatra haingana dia afaka manantitrantitra ny hozatrao ny fanazaran-tena satria mitombo ny lanjany ao amin'ny gym. Ny fanaintainanao azonao aorian'izay mety hanelingelina ny fampiofananao ary indraindray manasarotra ny fanohizanao ny fanazaran-tena. Na izany aza, rehefa maka testosterone phenylpropionate, izany no tsy tokony hampanahy anao indrindra satria ny fanafody dia manatsara ny fizotran'ny tavy fanasitranana. Hanasitrana haingana ny hozatrao ny hozatrao ary mamela anao hiasa isan'andro ary hanamora ny ahitanao ny vokatra tadiavinao.
Mampitombo ny tanjaky ny vatana amin'ny ankapobeny, ny tsy fisian'ny angovo ampy hiasana sy ny fifaninanana mahomby fa matetika ny fanamby lehibe indrindra atrehin'ireo mpanao bodybuilders. Ny phenylpropionate amin'ny testosterone dia hanentana ny haavon'ny angovo ahafahanao manofana mandritra ny ora maro ary hahatratra ny tanjonao haingana.
Ny fanamafisana ny rafitry ny taolana, ny osteoporosis dia fanamby atrehin'ny olona maro, ary ity fanafody ity dia manampy amin'ny fiadiana amin'ity aretina ity. Ny testosteron phenylpropionate dia hanatsara ny fahasalaman'ny rafitry ny taolanao. Nandritra ny taona maro izao, ny fanafody dia nampiasa ny fanafody ity hanampiana ny marary osteoporosis. Ny fandinihana dia mampiseho fa ny testosterone phenylpropionate dia iray amin'ireo fanafody mahery indrindra hiadiana amin'ny fahaverezan'ny fihenan'ny taolana.
Manatsara fanentanana momba ny firaisana ara-nofo sy ny faniriana; Ny haavon'ny testosterone natsangana dia hanatsara ny libido anao ho azy ireo. Etsy ankilany, hihatsara koa ny fanirianao. Noho izany, izany dia mahatonga ny testosterone phenylpropionate vokatra tsara ho an'ny bodybuilders sy ny olona miady amin'ny firaisana ara-nofo ambany. Amin'ny fihodinana amin'ny fihodinana feno fihodinana, dia hihatsara ny fanirianao ary ho mora aminao ny hahatratra ny tanjona irinao.
Testosterone phenylpropionate effects of effects
Toy ny fanafody hafa, testosterone phenylpropionate (1255-49-8) manana ihany koa ny fahantrany izay matetika no niainan'ireo mpampiasa izay manararaotra izany. Tokony hanaraka foana ny torolàlana amin'ny dosage ianao raha te hampihena ireo vokadratsiny ireo. Saingy noho ny fahasarotan'ny vatan'olombelona, ​​dia mety hiaina ny voka-dratsiny ny olona sasany na dia aorian'ny fisotroan-drà mety, fa ny fikajiana kosa afaka mifehy an'io. Ny sasany amin'ireo fiantraikany testosterone phenylpropionate mahazatra dia misy;
Ny fanafody dia mety hiteraka mony sy hihosotra amin'ny vatanao
Afaka mitarika amin'ny tsindry avo
Azonao atao koa ny miaina hypertrophy amin'ny prostate
Mety hiteraka boka ny mpampiasa sasany
Ho fanampin'izay, misy fiantraikany kely vitsivitsy azonao tratrarina, izay nanjavona ao anatin'ny andro vitsivitsy. Anisan'izy ireo, mandoa sy mivonto manodidina ny faritra tsindrona, fa raha miharatsy noho ny andrasana dia hanampy anao ny dokotera anao. Ny vaovao tsara dia ny fitantanana ny ankamaroan'ny vokatry ny Testosteron phenylpropionate raha mampahafantatra ny dokotera ianao amin'ny fotoana. Aza tohizanao intsony ilay fanafody raha sendra ny vokatr'ireto voalaza etsy ambony ireto fa tsy eken'ny dokoteranao. Indraindray dia mety hanahirana ny hamerina ny voka-dratsiny ratsy raha toa ka tara loatra ny fanafody.
Ny fatra mety dia manome antoka anao valiny momba ny kalitao sy amin'ny fotoana mety. Ny soso-kevitra testosterone phenylpropionate dosage kisendany amin'ny 100-200 mg izay tokony hakana indray mandeha isaky ny telo andro. Ho an'ireo mpampiasa vaovao dia tsara raha manomboka amin'ny fihenam-bidy ambany amin'ny fihodinana voalohany ary azo averina amin'ny fihodinana manaraka. Ny fatra dia tokony omena amin'ny alàlan'ny tsindrona sy intramuscularly. Matetika ianao dia mila maka ilay fanafody mandritra ny herinandro 6-8. Na izany aza, azo ovana io miankina amin'ny fihetsiky ny vatanao miaraka amin'ny testosterone phenylpropionate. Afaka manoro hevitra anao ny dokotera anao hanomboka fatra ambany kokoa noho ny 100mgs isaky ny andro 3, aorian'ny fizahana ny toe-pahasalamanao. Nomena torohevitra ihany koa ny vehivavy hampihena ny fatran'ny testosterone phenylpropionate kely hisorohana ny fivoaran'ny toetran-dehilahy.
Etsy andaniny, ireo bodybuilders na atleta 200mgs isaky ny andro 3 dia ho fatra tsara indrindra hahatratrarana tanjona tadiavina. Mba hahazoana vokatra tsara kokoa dia araho foana ny fatrao miaraka amin'ny sakafo mahasalama sy ny fanazaran-tena mety, raha te-hanangana hozatra ianao na rehefa manala tsingerina. Ity zava-mahadomelina ity dia azo ampiasaina eo amoron'ny steroid hafa anabolika, fa manome vokatra tsara ihany koa rehefa ampiasaina irery. Ho an'ny fihodinana feno fihodinam-bola, dia mety mila mandahatra ny testosterone phenylpropionate amin'ny steroid hafa ianao fa ampidiro ny dokotera anao hanampy anao hahazo ny fitambarana tsara indrindra. Aza hadino ihany koa ny manaraka ny toromarika rehetra amin'ny fandehanana amin'ny fihoaram-pefy dia mety hiteraka voka-dratsy mahery vaika.
5.Testo phenylpropionate antsasa-piainana
Ny phenylpropionate testosterone dia manana fiainana mavitrika amin'ny manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 indray mandeha rehefa avy natetika ao amin'ny rafitry ny vatanao. Noho izany, ny zava-mahadomelina dia tokony halaina indray mandeha isaky ny telo andro na indroa isan-kerinandro mba hitazomana ny famerenam-bola tsy tapaka amin'ny testosterone testosterone. Izany dia mahatonga testosterone phenylpropionate stéroid anabolic tonga lafatra ho an'ny bodybuilders maro noho ny fiainany lava. Misy fotoana ampy tsara ihany koa hanasitranana ny faritra tsindrona alohan'ny handraisanao ny fatra manaraka. Tadidio, ny testosterone dia mampivoatra ny fizotran'ny hozatra ihany koa, noho izany io zava-mahadomelina io dia manatsara ny fanatanjahantena tsara indrindra ho an'ny atleta na mpanao bodybuilder.
6.Testosteron phenylpropionate amin'ny fanapahana
Testosterone phenylpropionate poids dia manampy be loatra amin'ny fihenan-tava. Ny famatsiana tsy an'ity hormonina testosterone ity dia mampitombo ny metabolisma ary manampy amin'ny fampihenana ny tavy amin'ny vatana. Amin'ny maha-bodybuilder, mila mandeha mamaky ny kitapom-batana ianao hampiala ny tavy fatiantoka mety hanakana anao tsy hahatratra ny tanjonao. Napetaka ao ambanin'ny hoditra ny tavy amin'ny vatana ary mety ho sarotra aminao ny hampivelatra hozatra malefaka sy hita maso. Efa an-taonany maro ny atleta no nampiasa azy io ho an'ny kitapom-batana fanenon-tena sy fanenon-tena.
Afaka mampifangaro ny phenylpropionate testosterone miaraka amin'ny steroid anabolika tsara indrindra ianao amin'ny fanodinana fihenan-tsakafo toy ny Winstrol, Anavar na trenbolone. Miankina amin'ny toetranao ankehitriny sy izay tianao hotratrarina, ny fanafody anao dia hanampy anao hahazo fatra fanodinana mety hanampiana anao hahazo hozatra rehefa manapaka ny tavy tsy ilaina ianao. Mba hampivoarana ny fisehon'ny vatanao amin'ny ankapobeny amin'ny maha-atleta na bodybuilder, dia tsy maintsy miaraka amin'ny testosteron phenylpropionate mitsivalana miaraka amin'ny sakafo sahaza ary koa ny workout ianao.
7.Testosteron phenylpropionate ho an-doha
Eto ianao dia manana tanjona iray ihany, dia ny fitomboan'ny hozatra mandritra ny fotoana fohy indrindra. Ny bodybuilders matetika manomboka amin'ny bulking cycle, izay avy eo dia arahana ny fihenan'ny fihodinana. Ireo bodybuilders mivoatra koa dia mizaka tsy tapaka ny tsingerin'ny bulking mba hahazoana sy hihazona ny fihanaky ny hozatra. Ny testosteron phenylpropionate dia iray amin'ny steroids anabolic be mpampiasa indrindra amin'ny tsingerin'ny bulking. Na izany aza, ny atleta sasany dia aleony mifikitra amin'ny zava-mahadomelina hafa hanafainganana ny valiny. Ny fihodinana mihetsiketsika dia misy fanazaran-tena mavesatra izay mety hivezivezy ny hozatrao, ary raha tsy manana fanafody mety ianao toy ny testosterone phenylpropionate, dia mety hahita fanaintainana mafy ianao.
Ity steroid anabolika ity dia mandrisika ny fitomboan'ny hozatra ary koa manafaingotra ny fanasitranana ny hozatra. Noho izany, rehefa maka ny anao testosterone phenylpropionate ho an'ny bulking, ho azonao antoka ny fahazoana ny hozatra faobe sy ny fanarenana haingana ny hozatra. Ny zava-mahadomelina koa dia manana ester lava, izay adika amin'ny fiainana maharitra kokoa, noho izany dia hanafaka ny fatra indroa isan-kerinandro ihany ianao. Noho izany, mamela ny faritra tsindrona hanasitrana alohan'ny handeha amin'ny fatra manaraka. Ny dokoteranao, ny mpitsabo ara-pahasalamana sy ny mpampiofana anao dia tokony hitarika anao amin'ny fizotran'ny foza manontolo. Ataovy azo antoka foana fa fantatr'izy ireo bebe kokoa ny tanjonao ka rehefa manomboka maneno ianao na manala tsingerina ho an'ny tari-dalana tsara.
8.Testosterone phenylpropionate advantages
Ny testosteron phenylpropionate dia manolotra tombony maro ho an'ireo mpampiasa izay mampiasa azy io ary manaraka ny toromarika momba ny dosage. Sahala amin'ny steroid anabolika hafa, tsy maintsy manaraka ny torolàlana fampiasana amin'ny alàlan'ny mpanamboatra testosterone phenylpropionate sy ny mpitsabo anao ianao mba hahazoanao ireo tombontsoa ireo. Ny fanafody ity dia nanaporofo fa ilaina amin'ny sehatra ara-panatanjahantena sy ara-pitsaboana. Raha jerena ireo hevitra momba ny testosterone phenylpropionate isan-karazany, dia ho voamarikao fa maro ny mpampiasa no faly ary maneho ny fahafaham-pony rehefa avy mampiasa ity steroid anabolika mahery vaika ity. Ny sasany amin'ireo tombontsoa malaza testosterone phenylpropionate dia misy:
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba Anavar (Oxandrolone) ho an'ny bodybuilding(Misokatra amin'ny tranokala vaovao ianao)
Ny ampahany tsara indrindra amin'ny fampiasana testosterone phenylpropionate (1255-49-8) dia ny fakana ny tratranao indroa isan-kerinandro ihany. Izany no mahatonga io anabolic steroid io ho iray amin'ireo zava-mahadomelina tena ankasitrahan'ny bodybuilders sy ny atleta. Ny phenylpropionate Testosteron dia mijanona ho mavitrika amin'ny rafitry ny vatanao mandritra ny andro 4 ka hatramin'ny 5, izay manome fotoana tsara ny tsindronao hanasitranana alohan'ny handraisanao ny fatra manaraka.
Manome valiny kalitao ao anatin'ny fotoana fohy
Ny testosteron phenylpropionate dia isan'ireo vitsy an'isa andrabolika mihetsika eo amin'ny tsena ankehitriny. Ianao dia hitondra ny zava-mahadomelina mandritra ny herinandro ambony amin'ny 8, ary ho tratrarinao ny tanjonao raha mampiasa azy ianao amin'ny fikapohana na fanodikodinana. Na dia afaka manenjana ny tsingerin-dàlana anao aza ny dokotera, arakaraka ny tanjonao na ny fivoaranao aorian'ny fisotroan-drongony, dia mbola misy iray amin'ireo tsingerina faran'izay fohy indrindra amin'ny tontolon'ny anabolic.
Manatsara ny fampisehoana anao
Amin'ny maha atleta na bodybuilder anao dia mila hery sy tanjaka vatana ianao hahatratraranao ny tanjonao. Ny phenylpropionate amin'ny testosterone dia manatsara ny fampisehoanao ankapobeny amin'ny fampiofanana sy ny fifaninanana. Amin'ny lafiny iray, ity zava-mahadomelina ity dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanampiana ny atleta sy ny bodybuilders mba hanamaivanana ny fanaintainan'ny hozatra sy ny harerahana aorian'ny fanatanjahan-tena na mandritra ny fifaninanana. Tokony ho azonao antoka fa manaraka ny toromarika rehetra ianao mba hankafizanao ny valin'ny kalitao. Rehefa vita ny tsingerin'ny phenylpropionate testosterone anao dia hamolavola hery hitondra anao amin'ny fifaninanana sy ny fampiofanana ianao.
Fitsaboana ny tsy fahampian'ny testosterone rehetra
Amin'izao tontolo izao ara-pitsaboana dia mampiasa phenylpropionate testosterone ny mpitsabo amin'ny fitsaboana ny vatan'ny testosterone ambany toy ny firaisana ara-nofo amin'ny lehilahy, osteoporosis, miaraka amin'ny aretina hafa. Ny fatra testosterone ambany, indrindra amin'ny lehilahy, dia misy olana ara-pahasalamana samihafa izay ampiasaina amin'ny fitsaboana ny testosterone phenylpropionate. Ohatra, rehefa misy ny fanemorana ny toetran'ny lehilahy dia io no iray amin'ireo zava-mahadomelina tena ankafizin'ny medika.
Fihatra kely indrindra
Na dia misy otrikaretina anabolika rehetra aza dia misy fiantraikany isan-karazany, ny fakana testosteron phenylpropionate dia hanala vokatra be dia be indrindra raha toa ka mandray azy tsara ianao. Iray amin'ireo steroid anabolika vitsivitsy eo an-tsena izany fa misy fiantraikany kely kokoa. Ny ankamaroan'ny ny voka-dratsin'ny Testosteron phenylpropionate dia tsy misy afa-tsy amin'ireo izay manararaotra ny zava-mahadomelina. Raha mbola manaraka ny toromarika rehetra ianao, dia tsara ny mandeha, ary hankafizinao daholo ny tombony testosterone phenylpropionate.
9.Ny fijerin'ny testosteron phenylpropionate
Matetika, mpanjifa marobe no maneho ny heviny momba ny vokatra iray manokana amin'ny alàlan'ny fijerena sy salanisa. Toy ny vokatra ara-pitsaboana hafa ihany, ny phenylpropionate testosterone dia nahazo valin-kafatra samihafa avy amin'ireo mpampiasa samihafa. Ny ankabeazan'ireo mpampiasa dia afa-po amin'ny valiny nomen'ny zava-mahadomelina, toy izany koa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena izay ampiasan'ny atleta sy mpanao bikaingo hanampiana azy ireo hahatratra ny tanjony. Ho an'ny atleta, ny fanafody dia nanampy olona maro be hahazoana mihanaka hozatra mandritra ny fihodinana feno fihodinana ary fandoroana vatany amin'ny fihodinana fihodinana.
Ao amin'ny tontolo ara-pitsaboana, Testoster phenylpropionate dia nahazo mari-pahaizana tsara sy fijerena tsara. Ny medics dia nitatitra ny fahombiazan'ny an'io zava-mahadomelina amin'ny fitsaboana ny fiantraikan'ny testosterone ambany io dia matetika ny lehilahy. Araka ny efa voalaza teo aloha amin'ity lahatsoratra ity, ny fatran'ny testosterone ambany dia mety mitarika amin'ny firaisana ara-nofo, ny osteoporosis, ary ny fanemorana ny fivoaran'ny toetran'ny lahy toy ny fanalehan'ny feo, ny volombava, ary ny hafa. Ny marary an'arivony maro no midera ny phenylpropionate testosterone taorian'ny fitsaboana mahomby amin'ny aretina isan-karazany.
Ny vovony 10 Steroids Soavids malaza indrindra amin'ny 2019(Misokatra amin'ny tranokala vaovao ianao)
Ary misy koa mpampiasa sasany mimenomenona fa manana traikefa ratsy indrindra amin'ny phenylpropionate testosterone. Na izany aza, nampitahorin'izy ireo ny fikorontanana tamin'ny fihoaram-pefy na fanararaotan'ny testosterone phenylpropionate. Samihafa ny vatan'olombelona ary tsy ny fanafody rehetra miasa ho an'ny namanao no miasa ho anao ho azy. Manoro hevitra hatrany ireo mpampiasa ny vokatra rehetra izahay mba hizaka fizahana ara-pitsaboana alohan'ny hanombohan'izy ireo ny fatra. Tsara hatrany ny mampiditra ny dokotera anao amin'ny fizotran'ny dosage phenylpropionate testosterone ho traikefa tsaratsara kokoa.
10.Testosteron phenylpropionate amidy
Betsaka ny mpamatsy testosterone phenylpropionate misy na an-tserasera sy any amin'ny magazay ara-batana eran'izao tontolo izao. Na izany aza, mila mitandrina be ianao raha mila fanafody avo lenta izay hiantoka ny valiny kalitao amin'ny faran'ny tsingerinao. Tsy ny mpamokatra phenylpropionate testosterone izay hitanao amin'ny Internet dia marina, misy ny sasany mitady vola, ary tsy miraharaha ny valiny azonao raisina izy rehefa maka ny entanao. Talohan'izay mividy phenylpropionate testosterone, ataovy aloha ny fikarohana. Hamarino tsara fa ny fomba fiasan'ny mpamatsy testosterone phenylpropionate alohan'ny hanaovanao baiko iray. Vakio ny famerenam-bidy samihafa sy ny fijerena ny laharan'ny orinasa.
Izahay no mpamatsy testosterone phenylpropionate mpitaiza sy mpanamboatra any amin'ny faritra. Sariaka ny tranonkalanay, ka azonao atao ny misafidy ny fampiasa anao amin'ny alàlan'ny fampiononana ny tranonao na ny biraonao. Hantenanay foana fa mampita ny vokatra rehetra ao anatin'ny fotoana fohy indrindra izahay. Ianao dia afaka buy testosterone phenylpropionate powder am-pitondrana na ampy ho an'ny kitapom-bolanao na fanenjana. Aza adino, na manao ahoana na manao ahoana dia mora mahazo ilay zava-mahadomelina, dia aza manomboka mitondra izany raha tsy tarihin'ny dokoteranao.
Ankoatra izany, manoro hevitra hatrany ireo mpanjifantsika mahatoky isika mba hahatakatra izay lazain'ny lalàna ao amin'ny fireneny momba ny fividianana na fananana steroid anabolika alohan'ny hametrahan'izy ireo baiko ao amin'ny lampihazo. Izahay dia tsy te-hametraka ny mpanjifanay amin'ny olana amin'ireo mpanao lalàna amin'ny fividianana ny vokatra kalitao. Hamarino amin'ny dokoteranao na misy fetrany amin'ny fividianana testosterone phenylpropionate testosterone. Azonao atao ihany koa ny mifandray aminay amin'ny fotoana rehetra mila ilainao na rehefa manana olana ianao na fanontaniana momba ny vokatra. Ny solontenanay birao fanampiana dia vonona hatrany hanompo anao.
11.Testosteron phenylpropionate vs Testosteron propionate ho an'ny fananganana vatana
Tsy mitovy ny fahasamihafana misy eo amin'ireo zava-mahadomelina roa satria miasa amin'ny fomba mitovy izy ireo. Steroidista daholo izy ireo ary mizara ny antsasaky ny androm-piainany mitovy amin'ny 4 ka hatramin'ny 5. Azonao atao ny misafidy ny handray na ny roa ary mbola hahazoana valiny mitovy. Samy testosterone phenylpropionate sy propionate testosterone no ampiasain'ny mpanao bodybuilders hanampy azy amin'ny fananganana hozatra sy ho an'ny fihenan'ny fihodinana. Manamafy ny haavon'ny testosterone testosterone ao amin'ny vatana ny zava-mahadomelina, ary avy eo miteraka fanamoriana firaisana ara-nofo, fitomboan'ny hozatra ary manapotika ny tavy fihenan'ny vatana. Mpanao fanatanjahantena maro no mampiasa ny zava-mahadomelina roa mba hanatsarana ny zava-bitan'izy ireo satria mampitombo ny herin'ny vatana manontolo izay ahafahan'izy ireo mifaninana mahomby.
Ny testosterone phenylpropionate sy ny propionate testosterone dia tsy hitovy afa-tsy amin'ny endriny simika, fa izy ireo dia mizara ny ankamaroan'ny toetrany. Ny dosage ho an'ny steroids anabolic roa dia tokony alaina indroa isan-kerinandro ihany koa. Na izany aza, manatona ny dokotera momba ny zava-mahadomelina mba hiara-hiasa amin'izy roa mba hahazoana vokatra tsara kokoa. Tsy misy dikany ny handraisana azy roa Testosterone phenylpropionate ary testosterone mitombo ao anatin'ny tsingerin'asa mitovy. Ny fandraisana iray isaky ny mandeha dia mety hahasoa kokoa, fa hamafiso foana miaraka amin'ny dokotera. Azonao atao ny mividy steroid anabolic roa ao amin'ny tranokalanay.
El Osta, R., Almont, T., Diligent, C., Hubert, N., Eschwège, P., & Hubert, J. (2016). Anabolic abuse sy ny tsy fahampian'ny lehilahy. Andrology fototra sy klinika, 26(1), 2.
Tretzel, L., Thomas, A., Geyer, H., Gmeiner, G., Forsdahl, G., Pop, V., ... & Thevis, M. (2014). Fampiasana rà maina amin'ny famakafakana fanaraha-maso ny estetika steroid anabolika. Gazety momba ny famakafakana sy ny biomedical, 96, 21-30.
Bhawani, SA, Sulaiman, O., Hashim, R., & Ibrahim, MN (2010). Ny fanandramana chromatograpika ny tsiranoka matevina: Famerenana iray. Gazety Tropika momba ny fikarohana fanafody, 9(3).
Solimini, R., Rotolo, MC, Mastrobattista, L., Mortali, C., Minutillo, A., Pichini, S.,… & Palmi, I. (2017). Ny Hepatotoxicity misy ifandraisany amin'ny fampiasan-dàlana tsy mitahiry androgen amin'ny androbe. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 21(1 Supplie), 7-16.